Isitayela se-loft sifanelekile kwilizwe - I-Airbnb
Isitayela se-loft sifanelekile kwilizwe
Indlu engasemva yonke sinombuki zindwendwe onguGael
Esi simbo somgangatho we-rustic sifudumeleyo sifudumeleyo siyindawo entle yokubaleka kuyo yonke indawo..
Yindawo efanelekileyo yokuvalelwa, kwaye ukuba iyafuneka, kwaye ndingakwenzela ivenkile yokutya.
Ukuzenzela ukutya okanye iB&B. Kwiihektare ezi-1.4 zeegadi ezivuthiweyo ezineetafile, izitulo, i-BBQ kunye ne-Fire Pit ephakathi kwemithi. 5min ukuhamba ukuya kwilali yeMount Temple Bar & Restaurant. 4km ukusuka kwi-Old Rail Cycle Way, iMoate & M7, 11km ukusuka e-Athlone. Indawo ekhethekileyo ye-eclectic enezinto ezininzi zokuchukumisa umntu.
Eyakho i-loft epholileyo ilungile kwi-1.4acres yeegadi ezithandekayo ezivuthiweyo.
Ihonjiswe nguGael kwaye ine-eclectic ekhethekileyo kunye ne-rustic ivakale kuyo. AYIYOndawo entsha enxibe i-Ikea. I-apt yiplani evulekileyo, eqaqambileyo kwaye inomoya kunye nebhedi enye ekhululekile kakhulu ye-5ft enemiqamelo yeentsiba. Kukwakho nebhedi egotyiweyo yenkampu enokwamkela umntu wesithathu (i-€15 eyongezelelweyo ngobusuku).
Le ndlu iphezulu kwizinyuko zangaphandle.
Ikhitshi lelokuzenzela ukutya linefriji, ihob, i-oveni, umatshini wekofu, i-mircowave kunye nomatshini wokuhlamba. Zonke i-condiments zokupheka ezisisiseko zinikezelwa kwioli yeoli, imifuno kunye noluhlu olubanzi lweetiyi, i-tea ekhululekile kunye nekhofi.
Kukho imigangatho yeekhaphethi kunye nesileyiti esimnyama kuyo yonke indawo enendawo eninzi yokugcina.
Izinto zangasese kunye nesomisi seenwele nazo zikwabonelelwa.
Le yenye yezindlu ezimbini ezikhoyo. Ikhonkco kwelinye lingezantsi.
4.86 · Izimvo eziyi-184
I-Mt Temple yilali entle encinci egcinwe kakuhle enebhari, indawo yokutyela, ivenkile, icawa, ibala legalufa elinemingxuma eli-18 kunye noluhlu lokuqhuba. (Sinezinti zegalufa, kuzo zonke iisayizi ukuba ziyafuneka) Ikhaya lethu lihamba i-10min ukuya kuzo zonke ezi.
Imizuzu emi-5 uqhuba, kukho uhambo oluhle lwe-30min lokuhamba ecaleni kwebhogi kunye nehlathi apho ndizisa khona izinja zam mihla le.
I-Athlone yidolophu entle eselunxwemeni loMlambo iShannon. Kukho imyuziyam esebenzisanayo ekufanele ngokuqinisekileyo ukutyelelwa, njengeGalari yobugcisa yasimahla. Igalari yaseLuan yavulwa ngo-2013 ejongene nomlambo kwaye ibonisa ubugcisa obuhle be-Irish kunye neendawo.
Indawo yebhanki enomtsalane ekhohlo inendawo yokutyela enkulu (ezininzi esinokuyicebisa) kunye nee-pubs ezinomculo omninzi wesintu waseIreland kunye neyona bar yakudala yaseIreland, iSeans.
Inkuthazo yam ngeB&B yethu ibuyelela kwiiB&Bs zakudala....xa ubuhlala nosapho, ekhayeni labo. Apha unokufumana ezona hlabathi zimbini....indawo yakho yokulala nokutya okanye itafile yethu yegumbi lokutyela yokutya kunye nenkampani!
Indlu yethu ilungile ecaleni kwe-apt, ke sikufutshane kuzo zonke iimfuno zakho okanye naluphi na ulwazi onokuthi ulufune. Ukuba ufuna ... iswekile okanye isosi yesoya ..... nokuba yintoni na, siya kuzama ukunceda.
Ukuba ungathanda ukudibana nathi kwisidlo sakusasa esiphekiweyo ( €12.50 euro) okanye itreyi yesidlo sakusasa kwigumbi lakho (10 euro) vele undazise
Ndikwafundisa neklasi yokubhaka Isonka sase-Irish enokubhukishwa ngezinto ezenzeka ku-Airbnb
Inkuthazo yam ngeB&B yethu ibuyelela kwiiB&Bs zakudala....xa ubuhlala nosapho, ekhayeni labo. Apha unokufumana ezona hlabathi zimbini....indawo yakho yokulala nokutya okanye itafil…